Baadiyayaal, Alaab-qeybiyeyaal Bed-fidiyayaal iyo Soo-saarayaal -Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
FARSAMADA TAYADA QAADASHADA - Ku guuleysto qurux aan waqti lahayn oo leh dhulka Galbeedka Quilted bedh beddelka oo leh jilbaha jilicsan ee ka dhigaya jilicsanaanta dadaal la'aanta iyo shamsiyada u dhiganta si loo dhammaystiro muuqaalka dadka.
SHAQAALAHA TAYNTA PREMIUM - Waxaa lagu farsameeyay iyadoo la adeegsanayo velvet polyter subag qaali ah xagga hore iyo microfiber jilicsan oo gadaasha ah xilliyada dayrta iyo xilliga qaboobaha
SHAQAALAHA TAYO QAADASHADA PREMIUM -Qafiska ayaa ka samaysan maaddo tayo sare leh oo microfiber ah oo leh taabasho aad u jilicsan oo miisaankeedu dhan yahay.
JOOJINTA XIISAHA ​​BADAN & TAYO WANAAGSAN - Bedspread wuxuu ka kooban yahay waxyaabo badda ka mid ah, Adeegsiga noocyo kala duwan oo buluug ah si loogu daro qodobo dahsoon oo qolka ka dhigaya mid wanaagsan oo indhaha soo jiidan kara.
JOOJINTA & BADBAADINTA - Daboolida sariirta gadaal ee gadaal waxay ku dareysaa qoraal cusub, mid casri ah qolkaaga qurxinta.
TAYO AQOON GAAR AH –Bargaraafyada quruxda badan ayaa si qurux badan u siiya qolkaaga jiifka. Qalabka qolka jiifka waa la beddeli karaa: rog sariirta sariirta oo aad u hesho gabi ahaanba wax ka duwan, saameyn weyn.
SIDEY UGU SOO DHAWEYSATAY WAXYAABO RAAXO LEH –Barbaatooyinka quruxda badan ee sariiraha waxay soo jiitaan qolkaaga jiifka.
RAAXADA GUULEYSTA - Waxaa lagu farsameeyaa iyadoo la adeegsanayo velvet polyter subag qaali ah xagga hore iyo microfiber jilicsan oo xagga dambe ah xilliyada dayrta iyo xilliga qaboobaha.
Qaab ciyaareed qurux badan & TAYO BADAN - Bedspread-ku waa qaab qurux badan oo qaali ah oo xardhan iyo qalbi qaboojiye naqshadeynta xuduudaha